~ Witch83၏ စိတ်ကူးကမ္ဘာ ~: November 2012
Posted by witch83 at 6:24 PM4comments:
ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်ဆွဲချက်ကို Fedorovaက ငြင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမ ကိုယ်ပိုင်သဘောအရ Miss Universe 2002 ရာထူးမှ နုတ်ထွက်ပါတယ်ဆိုပြီး ပြောပါတယ်။ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ သူမရဲ့ပါရဂူဘွဲ့ကို ပြီးအောင် လုပ်ချင်လို့..လို့ဆိုပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက.... သူမဟာ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ပြဇာတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အောက်မလွတ် ညစ်တီးညစ်ပတ်တွေ အရမ်းပြောတတ်တဲ့ Howard Stern Showရဲ့ အလွန်အကျွံ စော်ကားတာကို ခံရပါတယ်ဆိုပြီး Miss Universe အနေနဲ့ ထမ်းဆောင်ရမဲ့တာဝန်တွေကိုငြင်းပယ်ပါတယ်။ Sternက သူမကို မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့ sexual မေးခွန်းတွေကို organizerတွေက သတိပေးတားမြစ်တာမျိုး မလုပ်ဘူးလို့ .. သူမက အပြစ်တင်ပါတယ်။
(Stern Show အကြောင်းကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Federal Communications Commission မှာ ခဏခဏ ဒဏ်ငွေဆောင်ရတဲ့ channel ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။)
ဒီလိုနဲ့ ... Miss Universe 2012 ဆုကို ပနားမားမယ် Justine Pasek က လွှဲပြောင်းယူလိုက်ရပါတယ်။ ( သူမဟာလည်း ပနားမားအတွက် ပထမဆုံးသော Miss Universe ပါ။) Fedorovaဟာ Miss Universe တစ်ယောက်အနေနဲ့ ထမ်းဆောင်ရမဲ့ တာဝန်တွေကို ငြင်းပယ်ပြီး၊ Miss Universe ဘွဲ့ကို ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် နုတ်ထွက်တဲ့ ပထမဦးဆုံးသော အလှမယ် ဖြစ်ပါတယ်။ Oxana Fedorova နုတ်ထွက်ပြီးနောက်မှာ Miss Universe Comitte က သူမကို Miss Universe 2002 အနေနဲ့ လုံးဝ လက်မခံတော့ပေမဲ့ အများပြည်သူအပေါင်းကတော့ Fedorova ကိုသာ Miss Universe 2002 အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ လူတွေဟာ သူမကို သရဖူပြန်ရုတ်သိမ်းခြင်းခံရတဲ့သူ ( Dethroned Miss Universe)လို့ ပြောရင်တောင် လက်မခံပါဘူး။ volunteerly give up လုပ်တာပါတဲ့လေ။ Resigned Miss Universe ပေ့ါ။ :)
Cadet and Beauty Queen life မှသည် .. Miss Russia (2002) ဆုကို ရယူခဲ့တဲ့၊ ရုရှားနိုင်ငံအတွက် ပထမဆုံးသော Miss Universe ဘွဲ့ကို ယူပေးခဲ့တဲ့၊ Yes or No person (မတွေဝေတတ်သူ) လို့ အဒေါ်ဖြစ်သူက သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့၊ သူ့အကြောင်းကို အငြင်းပွားမယ်ဆိုရင် ခုချိန်ထိ အငြင်းပွားလို့သေးတဲ့ ရုရှားပြည်သူတွေရဲ့ အချစ်တော်... Oxana Fedorova
After giving up the crown
Miss Universe 2002 ဘွဲ့ကို စွန့်လွှတ်ပြီးတဲ့နောက်....Oxana Fedorova ဟာ...
(၂၀၀၂)ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၂၇)ရက်နေ့မှာ သူမရဲ့ Phd စာတမ်း Fedorova ဟာ ကို ပြီးဆုံးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၀၃)ခုနှစ် မေလ (၁၆)ရက်နေ့မှာ ပါရဂူဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။
(1) Career Life
ပါရဂူဘွဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း အဲ့ဒီ MVD တက္ကသိုလ်မှာပဲ အချိန်ပိုင်းအနေနဲ့ စာဆက်သင်ခဲ့ပါတယ်။
ရဲအရာရှိအလုပ်ကိုလည်း ဆက်လုပ်ပြီး စက်တင်ဘာ (၂၀၀၂)ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ကြီးအဆင့် ရာထူးတိုးပေးခြင်းခံရပြီး၊ (၂၀၀၅)ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်မှုးအဆင့်ထိ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၀၂)နှစ်အကုန်ပိုင်းကစပြီး ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်မှုးလုပ်.. နောက်ပိုင်း ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ အက၊ modellingစတာတွေလုပ်ကိုင်ပြီး အနုပညာလောကထဲ ဝင်ရောက်အောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ (၂၀၀၂)ခုနှစ်ကစပြီး "Spokoinoi Nochi, Malyshi" .. "ကောင်းသောညချမ်းပါကလေးတို့ရေ.." ဆိုတဲ့ ရုပ်မြင်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဝင်ရောက်ကပြခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ(၂၃)မှာ ဒီအစီအစဉ်လေးဟာ ရုရှားရဲ့ အကောင်းဆုံး TEFI Children's Show ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမပြောတာကတော့ အဲ့ဒီရုပ်မြင်သံကြားကုမ္ပဏီဟာ သူမကို TV presenter လုပ်ဖို့ ကမ်းလှမ်းနေပေမဲ့ သူမက အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းနေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကလေးအစီအစဉ်မှာလုပ်ပေးပါဆိုလို့ ကလေးတွေကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ အောက်က ရုပ်ရှင် clipအတိုလေးကတော့ သူမပါတဲ့ အပိုင်းတိုလေးကို ထည့်ထားပေးတာပါ။
ဒီအစီအစဉ်လေးဟာ တော်တော်ကို နာမည်ကြီးပြီး ပြင်သစ်အပါအဝင် တခြားနိုင်ငံအချို့ကို သွားရောက် ကပြခဲ့ရပါသေးတယ်။ သူမဟာ (၂၀၁၂)ခုနှစ် ကလေးမမွေးခင်အချိန်အထိ ဒီရုပ်သံအစီအစဉ်လေးကို ပါဝင်ကပြနေတုန်းပါပဲ။
Fedorova ဟာ (၂၀၀၆)ခုနှစ် Dancing with the Stars ( Russia) show ပြိုင်ပွဲမှာ Alexander Litvinenko နဲ့တွဲကပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ top-5 ဝင်သွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒေါက်ဖိနပ်နဲ့ကသွားတာ တော်တော်ကြီးကို လှပါတယ်။ အောက်က ဗွီဒီယိုမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သူမဟာ (၂၀၀၈)ခုနှစ် ဧပြီလမှာ... ရုရှားရဲ့ "Sony Vaios P Series" ရဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမပါဝင်ခဲ့တဲ့ TV show တွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ၊ အစီအစဉ်တွေများလို့ အကုန် မပြောတော့ပါဘူး။ ထင်ရှားတာလေးတွေပဲ ဒီ ပို့(စ်)ထဲမှာ တင်ထားပါတယ်။ ဆုတွေလည်း ရခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၀၈)ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာတော့ သူမကိုယ်တိုင်ရေးသားတဲ့ "The formula of Style" စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အလှအပနဲ့ ဖက်ရှင်စတိုင်တွေအကြောင်းရေးထားပြီး သူမရဲ့ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လည်း ပါပါတယ်။
(၂၀၀၉)ခုနှစ်မှာတော့ သူမဟာ ဂီတလောကထဲ ဝင်လာပါတယ်။ ဂီတသင်တန်းကျောင်းတက်ပြီးတဲ့နောက်... Fedorova ဟာ သီချင်းဆိုခြင်းကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၀၉)ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာ ရုရှား tenor ( ယောကျာင်္းအသံမြင့် အဆိုတော်) Nikolay Baskovနဲ့ "Love is Right" လို့အမည်ရတဲ့ စုံတွဲသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို စဆိုခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ တစ်ကိုယ်တော်ခွေကတော့ (၂၀၁၀)မှာ ထုတ်တာပါ။ သူမရဲ့ တစ်ကိုတော်သီချင်းမှာ ဂီတာတီးတယ်လို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုကနေ သိရပါတယ်။ အောက်က သီချင်းအစီအစဉ်လေးကတော့ (၂၀၀၉)ခုနှစ်တုန်းက ရုရှားရုပ်သံအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ "Felicità" လို့အမည်ရတဲ့ အီတလီစုံတွဲသီချင်းကို Nikolay Baskovနဲ့ ဆိုထားတာပါ။ မြန်မာလို "ပျော်ရွှင်ခြင်း"လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။( Fedorova ဟာ သီချင်းဆိုတာတော့ သိပ်မကောင်းပါဘူး။ )
(2) Charity Work
Fedorovaဟာ မယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် charityလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ သူမဟာ ( ၂၀၀၄)ခုနှစ်လောက်ကတည်းက ကလေး charity programme တွေမှာ ဝင်ပါခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၀၆)ခုနှစ် မေလကတည်းက UNICEFမှာ စဝင်လုပ်ခဲ့ပြီး (၂၀၀ရ)ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့မှာ ရုရှားဖယ်ဒရေးရှင်းရဲ့ သံတမန်ရာထူးကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကလေးတွေအတွက် ပရောဂျက်တွေ၊ အများကြီး လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကမ်ပိန်းတွေလည်း ထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၀၉)ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ကလေးတွေအတွက် ရုရှားစစ်တပ်နဲ့ Orthodox ဘာသာရေးအသင်းတို့ရဲ့ အကူအညီကိုရယူပြီး "Спешите делать добро!, Hurry to Create Wonders"ဆိုတဲ့ charity ဖောင်ဒေးရှင်းတစ်ခုကို ထူထောင်ပါတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ကလေးတွေအတွက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ ကျဆုံးသွားတဲ့ ရုရှားစစ်တပ်ကစစ်သားတွေနဲ့ ပြည်ထဲရေးကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ သားသမီးတွေကို ဦးစားပေးလက်ခံပါတယ်။ ( တကတည်းမှပဲ.. ဒါကြောင့် ရုရှားအစိုးရနဲ့ မြန်မာအစိုးရ မဟာမိတ်ဖြစ်တာ... ) အောက်က ဗွီဒီယို clip လေးကတော့ UNICEF ambassodor အနေနဲ့ စကားပြောထားတာလေးကို ထည့်ပေးထားတာပါ။ ရုရှားလိုပြောတာဆိုတော့ ကိုယ်လည်း နားမလည်ပါဘူး။
(3) Political Activity
(၂၀၀၃)ခုနှစ်ကနေ (၂၀၀၅)ခုနှစ်ကြားထဲမှာ ရုရှားလူနေမှုဘဝပါတီ ( တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်လိုက်သည် :P) အတွက် မဲလိုက်ဆွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ (၂၀၀၄)ခုနှစ် သမ္မတရွေးကောင်ပွဲအတွက် အဲ့ဒီပါတီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး (၂၀၀၃)ခုနှစ်တုန်းကလည်း လူငယ်များအသင်းမှာ တွဲဖက်ဥက္ကဌလို့ သိရပါတယ်။
ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ပါလေရာငါးပိချက်ပါပဲ။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ပြောပါတယ်။ ဘဝမှာ ကိုယ်လုပ်လို့ရနိုင်သမျှကို လုပ်ကြည့်သင့်တယ်လို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ထုတ်ပြောဖူးပါတယ်။ ကျမထင်တာတော့ သူမဟာ civil law နဲ့ ကျောင်းပြီးထားပြီး လူငယ်တွေ၊ ကလေးတွေကို မြေတောင်မြှောက်ချင်ပုံ ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည့် Missology ကပေးတဲ့ All time gooddess Miss Universe (၅)ယောက်ထဲမှာ တစ်ယောက်အပါအဝင် ဖြစ်ခဲ့တာနေမှာ။
(4) Marriage Life
Fedorova ဟာ အင်တာဗျူးတော်တော်များများမှာ မိသားစုဘဝကို လိုချင်တယ်၊ မိခင်ဘဝကို ရချင်တယ်လို့ ပြောတတ်ပါတယ်။ (၂၀၀ရ)ခုနှစ် သြဂုတ်လမှာတော့ Philip Toftလို့ အမည်ရတဲ့ ဂျာမန် စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်နဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ မြူးနစ်မြို့မှာ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၁၀)ခုနှစ် ဧပြီလမှာတော့ တရားဝင် ကွာရှင်းပြတ်ဆဲခဲ့ပါတယ်။ ကွာရှင်းပြီးနောက်မှာလည်း အခင်အမင်မပျက် ဆက်ဆံလျက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ သူနဲ့တွဲဆိုနေကြအဆိုတော် Nikolay Baskov နဲ့ သူငယ်ချင်းအဆင့်က ကျော်လွန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ (၂၀၁၁)ခုနှစ်မှာတော့ အသက်(၃၈)နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရုရှားသမ္မတရုံးက အရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သူ Andrey Mikhaylovich Borodin နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ Andreyဟာ ရုရှားလက်ဝှေ့ကော်မတီရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(၂၀၁၂)ခုနှစ် မတ်လ၊ (၆)ရက်နေ့မှာတော့ Oxana Fedorovaဟာ သားယောကျာင်္းလေးတစ်ဦးကို မော်စကိုမြို့မှာ ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ကလေးနာမည်ကို Fyodor (Fedor)လို့ ပေးထားပါတယ်။
Fedorovaဟာ ကလေးမမွေးခင်အထိ "Good Night, Children"အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ကပြခဲ့ပြီး ကလေးမွေးပြီးသွားတော့လည်း TV presenter ဆက်လုပ်နေတုန်းပါပဲ။ ဝိတ်ချဖို့တော့ လိုပါပြီ။ :)
(၂၀၁၁)ခုနှစ်မှာ Fedorovaကို Global Beauties က အားလုံးသော Miss Universe ထဲမှာ အလှဆုံးအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ Missosology ကလည်း တွေ့ဖူးသမျှပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးမှာ Fedorova ရဲ့ Performaceဟာ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုပါတယ်။ (၂၀၁၂)ခုနှစ်မှာ ရုရှားမှာ poll လုပ်ကြတော့ Oxana Fedorova ကပဲ ရုရှားရဲ့ အလှဆုံးအမျိုးသမီးဆုကို ရသွားပါတယ်။
ဘက်စုံတော်သော၊ အရည်ချင်းရှိသော Oxana Fedorova တစ်ယောက် ဒီထက်အောင်မြင်မှုတွေ ရပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးရင်း ဒီပို့(စ်)ကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
စာကြွင်း။ ။ တကယ်လို့များ သူမရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ထပ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ internet ပေါ်မှာ အများကြီး ရှိပါတယ်။ Youtube ပေါ်မှာလည်း အင်တာဗျူးတွေ၊ TV showတွေ၊ MTVတွေ၊ dance show တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်။
(21/11/2012; 10:44AM; GMT+8) To Continue Reading
Posted by witch83 at 10:45 AM No comments:
Labels: Beauty Pageant, Biography, နှစ်သက်မိသော အလှမယ်များ
ကျမဟာ Beauty contest တွေ၊ show တွေကြည့်ရတာ နှစ်သက်သူမို့ မယ်တွေအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဟို..ဒီ လျှောက်ရှာဖတ်ရင်းက ဖတ်ရှုသိရှိမိတဲ့.... တခြားမယ်တွေနဲ့မတူဘဲ တမူထူးခြားတဲ့ Russia အလှမယ်(2001)... Miss Universe (2002) winner.... Oxana Gennadyevna, (Russian: Оксана Геннадьевна Фёдорова , Fedorova Oksana Gennad'yevna Fyodorova)ရဲ့ အကြောင်းကို ပြန်လည်ဝေမျှချင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီပို့(စ်)ဟာ ပထမဦးဆုံးရေးတဲ့ Biography ဖြစ်ပြီး ဘာသာပြန်နေကြသူ မဟုတ်တာကတစ်ကြောင်း၊ မြန်မာစကားလုံး အသုံးမကြွယ်တာကတစ်ကြောင်း၊ ပြီးတော့... wikipedia site ကလွဲရင် ကျန်တာတွေက ရုရှားဆိုဒ်တွေက data ရှာရတာမို့.. Russian English ကို ဘာသာပြန်ရတာကတစ်ကြောင်းကြောင့် ဖတ်ရတာ ထောက်နေမယ်၊ အမှားအယွင်းလေးတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက Fedorovaရဲ့ information ကို ရှာတဲ့အခါမှာ ဆိုဒ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ပြောထားတာလေးတွေ မတူပါဘူး။ ပြည့်လည်းမပြည့်စုံပါဘူး။ အများကြီးလျှောက်ဖတ်ပြီး တိုက်ဆိုင်မှ အမှန်ယူထားရတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီ information တွေအားလုံး ၁၀၀%မှန်ချင်မှ မှန်ပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ ဒီပို့(စ်)ကို နန်းခင်ဇေယျာ ရေပန်းမစားခင်အချိန်ကတည်းက စရေးထားတာပါ။ အခုမှ ရေးလို့ပြီးပါတယ်။ data ရှာလိုက်၊ ဓါတ်ပုံရှာလိုက်၊ ပုံတွေပြင်လိုက်၊ Youtube က ဗွီဒီယိုတွေရှာပြီးကြည့်လိုက်၊ အင်တာဗျူးရှာကြည့်လိုက်၊ စာတွေ ရေးလိုက်၊ စာပြန်ပြင်လိုက်နဲ့ တော်တော့်ကို အားစိုက်ထားရပါတယ်။ အချိန်တွေလည်း အများကြီး ယူထားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပို့(စ်)ကို ပြန်လည်ဝေမျှတော့မယ်ဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး witch83 ကို creditပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အမည် : Oxana Fedorova
မွေးနေ့ : 17-Dec-2012
Hometwon : Pskov, Russia
Race/ Religion : Russian Orthodox Christian
Height :5ft 10in (178cm)
ပညာအရည်အချင်း : P.hd (Civil Law), St.Petersburg University (MVD University)
P.hd Dissertation : Regulation of Private Detective and Security Activity in the Russian Federation
အလုပ်အကိုင် : Television presenter, အဆိုတော်, ရဲအရာရှိ (retired), former lecturer, actress, UNICEF ambassodor
ရရှိဖူးသည့် Title များ : Miss Russia 2001, Miss Universe 2002 (Dethroned/ Resigned)
Others : Martial Arts expert, Kalashnikov rifle shooter, volleyball palyer, play saxophone & guitar
"လှတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ မတော်တတ်ဘူး၊ အရည်အချင်း မရှိဘူးတတ်ဘူး"လို့ လူတစ်ချို့  ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို မှားယွင်းကြောင်း သက်သေပြတဲ့သူတွေထဲက တစ်ဦးကတော့ ၂၀၀၁ခုနှစ်ရဲ့ ရုရှားအလှမယ် Oxana Gennadyevna Fedorova ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Fedorovaကို (၁၉၇၇)ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၇)ရက်နေ့.... ရုရှားနိုင်ငံ၊ Pskov မြို့လေးမှာ မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးတည်းသောသမီးဖြစ်ပြီး မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ မိခင်ဘက်က အဘိုးအဘွားတို့ရဲ့ ပြုစုပြိုးထောင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူမ အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်တဲ့အထိ အဲ့ဒီမြို့မှာပဲ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Fedorova ရဲ့ အပြောအရတော့ သူမရဲ့ မိခင်ဘက်ကအဖိုးအဖွားတွေဟာ သူမအပေါ်မှာ သိပ်ကို ရည်မှန်းချက် မြင့်မားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ( မူရင်းစာထဲမှာတော့ demanding ဖြစ်တယ်လို့ ရေးထားပါတယ်။)
သူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာလည်း အရမ်းလှတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မိခင်က စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံမှာ သူနာပြုအလုပ်လုပ်ပြီး ဖခင်က နျူကလီးယားပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ.. (၃)နှစ်သမီးအရွယ်မှာ ကွာရှင်းခဲ့ကြပြီး Fedorovaဟာ ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အကြောင်းကို အဲ့ဒီကတည်းက လုံးဝ မသိရတော့ပါဘူး။ (၂၀၀၅)ခုနှစ်မှာ ဖခင်ဖြစ်သူကို ပြန်ရှာခဲ့ပေမဲ့ သေဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ပါတယ်။
Fedorova ရဲ့ ကလေးဘဝတုန်းက မိသားစုပုံ
အသက်ရှစ်နှစ်အရွယ်မှာ comprehensive school ပြီးတော့ secondry police school မှာ ကျောင်းဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ရဲသင်တန်းကျောင်းမှာတက်နေတုန်းက သူမဟာ သူမတို့ရဲ့ သံစုံတီးဝိုင်းမှာ ဆက်ဆိုဖုန်းတီးခဲ့တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းဘော်လီဘောအသင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီး သူမတို့အသင်းဟာ (၁၉၉၅)ခုနှစ်မှာ မြို့ အလိုက်ပြိုင်ပွဲမှာ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Police academyက ဒီပလိုမာသင်တန်းကို ဂုဏ်ထူးနဲ့ အောင်ပြီးတော့ Pskov လေဆိပ်မှာ စုံစမ်းစစ်စေးသူအဖြစ် (၆)လ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ကနေမှတဆင့် St.Petersburg တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်တက်နေတဲ့အချိန်တလျှောက်မှာပဲ Pulkovo ရဲစခန်းမှာ ရဲစုံထောက်အဖြစ် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ သူမဟာ မော်ဒယ်အလုပ်ကို စတင် လုပ်ကိုင်လာပြီး အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဝင်ပြိုင်လာပါတော့တယ်။ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောတာကတော့ သူမကို အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က မော်ဒယ်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့၊ မော်ဒယ်သင်တန်းကျောင်းလာတက်ဖို့ လာရောက်ကမ်းလှမ်းပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာ လက်ခံလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်တဲ့ ရဲဝန်ထမ်းတွေဟာ သူမရဲ့အမာခံပရိတ်သတ်တွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ (၁၉၉၉)နှစ်မှာတော့ သူမတို့ တက္ကသိုလ်ရဲ့ အလှမယ်.. Miss St.Petersburg (1999)ဆုအပြင် Miss Kakoagathia 1999 ဆုကိုပါ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Miss Fitness, Miss Fortune ဆုတွေကို ရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၁ခုနှစ်မှာတော့ Miss Russia ဘွဲ့ ကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ရေကူးဝတ်စုံနဲ့ အလှကြီးလှနေတဲ့ Oxana Fedorova
ပညာရေးဘက်ကို ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့... သူမဟာ (၂၀၀၀)ခုနှစ်မှာ ရွှေတံဆိပ်ဆုနဲ့ ဘွဲ့ရခဲ့ပြီး အဲ့ဒီ St.Petersburg (MVD Universtiy)မှာပဲ ဘွဲ့လွန်ဆက်တက်ခဲ့ပါတယ်။ ဘွဲ့ လွန်တက်ရင်း dissertation ရေးနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ.... သူမဟာ အဲ့ကျောင်းမှာပဲ နည်းပြပြန်လုပ်ပြီး civil law ဘာသာကို ပြန်လည်ပို့ချခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ PHD ဘွဲ့ အတွက် "ရုရှားဖယ်ဒရေးရှင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်စုံထောက်တွေလိုက်နာရမဲ့ နည်းဥပဒေနဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး လမ်းစဉ်များ"ဆိုတဲ့စာတမ်းကို ပြုစုခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းတွေဟာ သူမရဲ့ အောင်မြင်မှုသရဖူဆောင်းမဲ့လမ်းကြောင်းကို လျှောက်လှမ်းနိုင်စေဖို့ရဲ့ လမ်းစပဲလို့ ရုရှားပြည်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း (၂၀၁၀)ခုနှစ်လောက်တုန်းကဖြေခဲ့တဲ့ အင်တာဗျုးတစ်ခုမှာ "ကျမဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၈)နှစ်လောက်တုန်းကမှ လူသိများခဲ့တာပါ။ အဲ့မတိုင်ခင်တုန်းကတော့ ရိုးရှင်းတဲ့မိန်းကလေးမှသာ ဖြစ်ပါတယ်။ မော်ဒယ်အလုပ်ကမ်းလှမ်းခံရပြီးမှ ဒီလို ပြောင်းလဲခဲ့တာ"လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီ (၂၀၀၂/ ၂၀၀၃)ဝန်းကျင် ကာလတွေဟာ သူမဘဝကို တစ်ဆစ်ချိုး ပြောင်းလေစေခဲ့တာပါပဲ။
(Fedorova ရုရှားမယ် ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်ကို တွေးကြည့်ရင် တော်တော်ဟော့ခဲ့မယ် ထင်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ရဲ့မယ်ဘွဲ့ကို (၁၉၉၉)မှာရပြီး (၂၀၀၀)မှာ gold medal နဲ့ graduate ဖြစ်။ ဘွဲ့ လွန်ဆက်တက်ရင်း တက္ကသိုလ်က ဆရာမလုပ်။ သူ... Miss Russia ဝင်ပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ တက္ကသိုလ်ရဲ့ အလှမယ်ဟောင်းအနေနဲ့ အားပေးကြမဲ့ ကျောင်းနေဖော်၊ကျောင်းနေဖက်တွေ၊ ကိုယ့်ဆရာမအချောအလှလေးကို ဝိုင်းအားပေးကြမဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ၊ သူ့ရဲ့ အမာခံပရိတ်ဖြစ်တဲ့ လုပ်ဖက်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတွေ .... အင်း... တော်တော်ကို ဝက်ဝက်ကွဲ အားပေးကြမယ်ထင်တယ်နော်။ Miss Myanmar 2012, နန်းခင်ဇေယျာကိုအားပေးတဲ့သူတွေနဲ့ ဘယ်သူက ပိုသာမလဲတွေးမိသေး။ အဟေး။ :P )
Fedorova ဟာ Miss Russia 2001 ဘွဲ့ ကို ရခဲ့ပေမဲ့ Miss Universe ပွဲကို သွားပြိုင်ဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် first runner-up ဖြစ်တဲ့ Oxana Kalandyrets က သွားပြိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။၂၀၀၂မှာမှ သွားပြိုင်ပြီး ရုရှားနိုင်ငံအတွက် ပထမဦးဆုံးသော Miss Universe (2002)ဆုကို ဆွတ်ခူးပေးခဲ့ပါတယ်။
Fedorova ဟာ ဒီ ၂၀၀၂ခုနှစ် Miss Universe အတွက် သွားပြိုင်တာတောင် case တက်လိုက်ပါသေးတယ်။ Fedorova သွားပြိုင်မှာလား၊ မပြိုင်ဘူးလားဆိုတာ နောက်ဆုံးနေ့ရောက်တဲ့အထိတောင် မသေချာသေးပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မေလ holidays ကြောင့် စာရွက်စာတမ်းတွေ မပြည့်စုံဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း Miss Universe 2002 လက်ခံကျင်းပပေးတဲ့ Pureto Rico က သူမကို ဗီဇာမထုတ်ချင်ခဲ့ပါဘူး။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Fedorovaဟာ ပြိုင်ပွဲကို (၄)ရက်တိတိနောက်ကျပြီးမှ ဝင်ပြိုင်ရပါတယ်။ ဒီလိုနောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့် Miss Universe Comitte လည်း အစည်းအဝေးထိုင်ပြီး ခေါင်းချင်းရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ပေးပြိုင်လိုက်ပါတယ်။ အကယ်၍သာ Fedorovaဟာ နောက်ထပ်တစ်ရက် နောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင် သူမဟာ ဒီ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ပြိုင်ခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရသွားပြီးတဲ့နောက် swimming suits ပြိုင်ပွဲမှာ သူမကို ဒိုင်တွေက 10မှတ် မှာ 9.88 ပေးပါတယ်။ ဒါဟာ Miss Universe ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါမက တခြား beauty pageants ပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးရဲ့ swimwear competitionမှာ စံချိန်အမြင့်ဆုံးပါပဲ။ သူမဟာ ကိုယ်လုံးလှတဲ့အပြင် Atheletic ပါ ဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်လေးကို ကျစ်ကျစ်လစ်လစ် ရှိပါတယ် (ဒါက ကိုယ့်အမြင် )။ ။ 2002 ရဲ့ evening gown section မှာလည်း ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကြားမှာ Fedorovaကပဲ 9.64နဲ့ အမှတ်အများဆုံး ရသွားခဲ့ပါတယ်။
(၂၀၀၂)ခုနှစ်မှာ နာက်ဆုံး top5ဝင်သွားသူတွေကတော့ "Miss South Africa", "Miss China", "Miss Venezuela, "Miss Panama" နဲ့ "Miss Russia"တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Miss Universe 2002, Top-5
ဒီငါးယောက်လုံးကို မင်းကို.. ဘယ်အရာက ရှက်သွေးဖြာစေသလဲ ( What makes you blush?)လို့ မေးပါတယ်။ တခြားမယ်တွေဖြေတာ ပေါက်ကရတွေလိုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားနေလို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Miss South Africa ဖြေတာတော့ မဆိုးပါဘူး။
Fedorova ဖြေပုံလေးက တိုတိုလေးပါပဲ၊ ရိုးလည်းရိုးပါတယ်။ "အမှားတွေပြောမိတဲ့အချိန်မှာ ကျမ ရှက်သွေးဖြာပါတယ်"တဲ့။ ( "I blush when I say wrong things") ဒါပေမဲ့ ထူးခြားတာက မဖြေခင်မှာ ရှက်ပြုံးလေးပြုံးပြီး .. သာသာလေးရယ်လိုက် ပါတယ်။ ဒီစကားကိုပြောပြီးချိန်မှာတော့.. သူမမျက်နှာမှာ ရှက်သွေးဖြာသွားတာပါပဲ။ လူတွေ ပြောစမှတ်ပြုစေလောက်အောင်ကို ချစ်ဖို့ကောင်းလွန်းပါတယ်။ အောက်မှာ ဗွီဒီယိုလေး ချိတ်ပေးထားပါတယ်။ ကြည့်ကြည့်ပါ။
Oxana Fedorova ရဲ့ Miss Universe 2002 ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံတွေကို ဖြတ်ပြီးစုပေါင်းထားတဲ့ Youtube Clip လေးပါ။ Euro Asia နေရာကလူမို့ Miss Universe 2001 နဲ့ ပါးသုံးခါကပ်ပါတယ်။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်းနဲ့ကို ချစ်မိပါတယ်။ presenter နှစ်ယောက်က သူ့ကို သဘောကျကြတယ်ဆိုတာလည်း ဒီ movie clip လေးမှာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ ပွဲကြည့်ပရိသတ်ကလည်း တော်တော် အားပေးကြပါတယ်။ Miss Universe ဆုကို ကြေငြာပြီးလို့ သူ..အံ့သြဝမ်းသာဖြစ်နေပုံလေးကလည်း ချစ်စရာလေးပါ။ "Oh my god, Oh my god" ဆိုပြီး ရွတ်နေပါတယ်။
with other pageants
Last3Beauties ( L --> R, Panama, China, Russia)
Are you ready? (Panama & Russia)
Miss Universe 2002ဆုကို ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် Fedorovaဟာ Miss Universe Comitte ကအပြင် ရုရှားနိုင်ငံကပါ လက်ဆောင်တွေ၊ ဆုတွေ အများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ နာမည်ထင်ရှားတဲ့ ရုရှား အရုပ်ဒီဇိုင်နာ Helen Yarmak ကလည်း Fedorovaအတွက် အရုပ်လုပ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
Fedorovaဟာ ၂၀၀၂ခုနှစ်ရဲ့ စကြာဝဠာ အလှမယ်အနေနဲ့ ပြင်သစ်၊ အီတလီ၊ ကင်ညာ၊ ကနေဒါ၊ ဂရိ၊ ပနားမား၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ ပူရေတိုရီစတဲ့ နိုင်ငံများကို သွားခဲ့ပါတယ်။ ကင်ညာကို အေအိုင်ဒီအက်(စ်)ရောဂါသည်များနဲ့ မိဘမဲ့ကလေးများအစီအစဉ်အတွက် သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Fedorova ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်လာပါတော့တယ်။
အပိုင်း(၂)ဆက်ပါမယ်။ ပို့(စ်)က တအား ရှည်သွားလို့ပါ။ ဒီနေ့ပဲ ပြီးအောင် တင်ပေးမှာပါ။း)
(21/11/2012; 10:29 AM ;GMT+8)
5. http://kimguarnes.wordpress.com/2008/09/11/on-spotlight-oxana-fedorova-2/ To Continue Reading
Posted by witch83 at 10:28 AM No comments:
အင်နားရှားဆိုသည်မှာ အရာတ္ထုတစ်ခု၏ ရွေ့ လျှားနေသော၊ ရပ်နေသောအခြေအနေမှ ဆန့်ကျင်ဘက် အခြေအနေသို့ ပြောင်းလဲရန်ဆန့်ကျင်သောအား ဖြစ်သည်။
ဥပမာ။ ။ ဘတ်(စ်)ကားပေါ်တွင် မတ်တတ်ရပ်စီးလာသော လူတစ်ဦးသည် ရုတ်တရက် ကားဆောင့်ရပ်လိုက်သောအခါ ကားသွားရာလမ်းအတိုင်း ရှေ့ သို့ ငိုက်စိုက်လဲကျသွားသည်မှာ အင်နားရှားသဘောတရား ဖြစ်သည်။
အင်နားရှားသီအိုရီဟာ ရူပဗေဒဘာသာအတွက် တကယ့်ကို အရေးပါပြီး Newton First Law ရဲ့ အခြေခံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရွေ့  / အလျှင်သဘောတရားအတွက် ဖြစ်ပေမဲ့ ... ဒီလောကရဲ့ ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက်လည်း မှန်သင့်သလောက် မှန်ပါတယ်။
ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် ...
~~ စာမေးပွဲမဖြေခင်နဲ့ ဖြေခါနီး စာကို အသည်းအသန် ကြိုးစားပြီး ကြည့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် စာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့ကိုကျော်... နောက်တစ်ရက်၊နှစ်ရက်လောက်အထိ... နေမထိ၊ ထိုင်မသာ ဖြစ်ရခြင်းဟာလည်း နေမြဲအတိုင်းနေလိုခြင်း (အင်နားရှား) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
~~ ကျောင်းပ်ိတ်ရက်ရှည်ကုန်လို့ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ရင် ကျောင်းပြန်မတက်ချင်တာ လည်းအင်နာရှားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
~~ ရုံးမှာ အမြဲတမ်း အလုပ်များနေရာက လွန်ခဲ့တဲ့ လေး..ငါးပတ်ကျော်လောက်ကစပြီး အလုပ်.. သိပ်...မရှိတော့ အတော် မနေတတ် မထိုင်တတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့လိုဖြစ်လို့ စာလည်းမလုပ်ချင်တာနဲ့ blogging ဘက်ကိုလှည့်ပြီး စာရေး၊ စာဖတ် ပြန်လုပ်ရင်း နေသားကျလာပါတယ်။
~~ အလုပ်သိပ်မရှိရာကနေ... ပြန်..အလုပ်ရှုပ်လာတော့လည်း စိတ်က အလုပ်မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ ရန်ကုန်မပြန်ခင် တစ်ပတ်လောက်အလိုမှာ အလုပ်နည်းနည်း ပြန်များလာတော့ အလုပ်လုပ်ရတာ စိတ်ထဲ သိပ်မပျော်တော့ပါဘူး။ ပြန်ရမဲ့ တစ်ပတ်.. တနလာင်္နေ့လည်းရောက်ရော ရုတ်တရက်ကြီး အလုပ် အရမ်း များသွားပြီး " Inertia, Intertia" လို့စိတ်ထဲကနေပြောပြီး အလုပ်တွေလုပ်ရင်းက ပို့(စ်)တစ်ပုဒ်တော့ တင်ဦးမယ်လို့ တေးထားလိုက်ပါတယ်။
တနင်္လာနေ့ကနေ..ကြာသာပတေးအထိ (၄)ရက်လုံး... ပေါ်လာတဲ့ issue တွေကိုရှင်း၊ hand over လုပ်စရာရှိတာတွေလုပ်၊ clear လုပ်စရာရှိတာတွေအပြီးသတ်။ ကြာသာပတေးမှာ ရုံးပြန်နောက်ကျ... သောကြာနေ့ မနက်အစောကြီး ရန်ကုန်ထပြန်... ဒါနဲ့ပဲ ပို့ (စ်)မရေးဖြစ်ပါဘူး။
~~ ရန်ကုန်ကနေ စလုံးကို ပြန်လာရမယ်ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ ပြန်မလာချင်တော့ပါဘူး။ သြော်... Intertia... Intertia... စလုံးကနေ ရန်ကုန်ပြန်မယ်ဆိုတော့ မပြန်ချင်ဘူးဆိုတာ မရှိသလိုပဲနော်!!!!
ရန်ကုန်ကပြန်ရောက်တော့ အရင်လောက် အလုပ်.. သိပ်မရှိတော့တာမို့ mood မပျောက်ခင်... ဒီပို့(စ်)ကိုမြန်မြန် ချရေးလိုက်ပါတယ်။
အင်နားရှားသီအိုရီနဲ့ စတင်ထိတွေ့ခဲ့ရတာကတော့ (၉)တန်းကျောင်းသူဘဝတုန်းက ရူပဗေဒဘာသာမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ရူပဗေဒကို သိပ်.. စိတ်မဝင်စားသူမို့၊ ပြီးတော့ (၁၀)တန်းပြီးလို့ တက္ကသိုလ်တက်တော့လည်း ရူပဗေဒကို မသင်ရတာမို့ ဒီ..သီအိုရီကို မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပါပဲ။ ဒီသီအိုရီကို ခုချိန်ထိ မှတ်မိစေတာကတော့ ဆရာမ ဂျုးရဲ့ " စောင့်ဆိုင်းခြင်းနိယာမ" ဝတ္ထုတိုကို ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဖတ်ပြီးမှပါ။ (ပထဦးဆုံးအကြိမ်ဖတ်မိတုန်းက High School တက်တုန်းကပါ။ ဘယ်နှစ်တန်းတုန်းက ဖတ်ခဲ့တာလည်းတော့ မသိတော့ပါဘူး။ Physics ပဲ မသင်ရသေးတာလား၊ ငယ်သေးလို့ absorb လုပ်ပုံ မတူတာလားတော့ မသိပါဘူး။ အဲ့ဒီ အင်နားရှားသီအိုရီကို သတိမထားမိပါဘူး။ )
ဝတ္ထုတိုလေးရဲ့ အကျဉ်းချုပ်ကတော့.... တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သိပ်ချစ်ကြတဲ့၊ အသွင်မတူတဲ့ လင်မယားမှာ ယောကျာင်္းဖြစ်သူက နိုင်ငံခြားကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ နှစ်အနည်းငယ် ( သေချာ မမှတ်မိပါ။ (၃)နှစ်ထင်ပါသည်။) သွားရတော့ တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့တဲ့ မိန်းမနေရာကနေ စကားပြောတဲ့ပုံစံလေးပါ။ သွားခါစတုန်းက လွမ်းပြီး မနေတတ်၊မထိုင်တတ်ဖြစ်ပြီး လွမ်းခဲ့ရပေမဲ့ .... ကြာလာတော့ တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့ဘဝကို နှစ်သက်လာပြီး စည်းကမ်းကြီးတဲ့ ယောကျာင်္းလုပ်သူ မြန်မာပြည်ပြန်လာခါနီးမှာ ဝမ်းမသာနိုင်တော့တဲ့အကြောင်း၊ လေဆိပ်မှာ သွားကြိုရင် (၃)နှစ်ကြာခွဲနေရတဲ့ ယောကျာင်္း ပြန်လာလို့ ပျော်ရွှင်တဲ့ဟန်လုပ်ပြီး ပြုံးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမဲ့အကြောင်း ရေးထားတာပါ။
အဲ့ဒီ ဝတ္ထုတိုထဲမှာ Juu ရေးထားတာတဲ့ အချက်နှစ်ချက်ကို ခုချိန်ထိ မှတ်မိနေပါသေးတယ်။
အင်နားရှားရဲ့ သီအိုရီအတိုင်း ယောကျာင်္းထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ မခွဲနိုင်မခွာရက်ဖြစ်ရပြီး ပြန်လာခါနီးကျတော့ တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့ဘဝကို နေမြဲအတိုင်း နေလိုတယ်ဆိုတာရယ်...
တစ်စုံတစ်ခုကို လိုချင်လို့ ..... စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အရာကို ရရှိခြင်းနဲ့ ရရှိလို့ ပျော်ရွှင်ရခြင်းနှစ်ခုကြားက ဝှက်ဖဲမှာ အဲ့ဒီအရာကို ရရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ်ပါ။ ( ကိုယ်လိုချင်တာ/ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ရလာတာ/ ဖြစ်လာတာကို ပျော်တယ်မပျော်ဘူးဆိုတာ ရလာတဲ့၊ ဖြစ်လာတဲ့ "အချိန်"ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။)
အဲ့ဒီနှစ်ချက်ထဲက ဒုတိယအချက်ကို ဒီဘလော့က Quote Post တစ်ခုမှာ ထည့်ရေးဖူးပါတယ်။ ခုတော့ ပထမအချက်အကြောင်းကို ရေးပါရစေ။
အဲ့ဒီ ဝတ္ထုကို ဒုတိယအကြိမ်ဖတ်ပြီး သတိထားမိသလောက်တော့ လူတွေဟာ လုပ်နေကျအရာတစ်ခု မလုပ်ရတော့ရင် မနေတတ်၊ မထိုင်တတ် ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲ.. မလုပ်ရတာကြာလာပြီဆိုရင်တော့ ပြန်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာ မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့်အတွက် ပင်ပန်းခက်ခဲတဲ့အရာဆို ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အချစ်၊ အမုန်းခံစားချက်မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ "Love makes time pass, but time is certain to make love pass"တဲ့.... အဲ့လို ကြားဖူးပါတယ်။ "အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံးသမားတော်"လို့လည်း ပြောတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား???
ဒါကြောင့်... Change တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုလာရင် ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်... Inertia သဘော ( နေမြဲအတိုင်းနေလိုခြင်း) ကို သွေဖယ်ပြီး "adaptation time" ကျော်ရင်ရလာမဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုတွေးပြီး ပြောင်းလဲစရာရှိ ပြောင်းလဲရအောင်လို့ ပြောရင်း ဒီပို့(စ်)လေးကို နိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်။
(15/11/12; 2:24 PM; GMT+8) To Continue Reading
Posted by witch83 at 2:30 PM No comments:
Labels: တွေးမိသမျှ, ရေးမိသမျှ